admin1 – Page 4 – Puntland Voice
Saynisyahanno Shiinays ah ayaa sheegay in ay qayb ahaan duntay xaruntii ay Kuuriyada Waqooyi ku tijaabin jirtay hubka nukliyeerka ah
, taas ka dhigi karta mid aan la adeegsan karin. Xarunta tijaabada ee Punggye-ri ayaa lix jeer lagu tijaabiyay hub nukliyeer ah tan iyo sannadkii 2006-dii. Markii u dambaysay ee tijaabada lagu sameeyay bishii Sabtembar waxaa gariirka sii waday dhulka, […]
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee Maamulka Jubbaland ayaa waxaa la horgeeyay C/laahi Asad Ismaaciil oo horey loogu eedeeyay inuu dilay Xaaskiisa 14-kii bishan April
, waxaana xaaskiisa lagu magacaabi jiray Muxubo Maxamed Guure. Dilkan ayaa waxa uu ka dhacay xaafada Calanley ee Magaalada Ksismaayo, xilli habeen ah saacadu marka ay aheyd 08:00 fiidnimo, sida ay sheegtay Maxkamadda. Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka […]
Soomaaliland oo Boqor Buurmadow ku xukuntay Shan Sano
Boqor Cismaan Buur madaw ayay maxkamad kutaala Gobalka maroodi jeex ee Hargaysa ku xukuntay shan sano oo xarig ah. Sida wararku sheegayan masuulkan ayaa xabsiga dib logu celiyay saaka kaddib markay maxkamaddu xukuntay, dhanka kale ma jirin wax qareen ah […]
Camey oo raali-galin siiyay Culimada
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland, Cabdixakiim Cabdullaahi Cumar Camey, ayaa raali galin ka bixiyay hadal uu dhawan warbaahinta ka sheegay oo khuseeyay oraahdii Culimada ee ku aadanayd Fanaanada Kiin Jaamac. “Shir aan ka hadlayay aan ka iri war culimadu ha ka hadasho […]
Khudbada Musharaxiinta Gudoonka baarlamaanka Soomaaliya oo Socota
Guddiga qaban-qaabada doorashadda gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaliya oo shalay soo xirey araaji qabashadda Musharixiinta ayaa sheegay in ay is diiwaan galiyeen 11-musharax oo isugu jira Xildhibaano iyo wasiiro ka tirsanaa Xukuumadda Soomaliya. Dhanka kale Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa sheegay in ay […]
Wasiir kuxigeenka Amniga Gudaha Dowladda Faderalka Soomaaliya Cabdinaasir Siciid Muuse ayaa warbixin la jeediyey shirweynaha Wasaaradda Amniga Dowladda Faderalka iyo Dowladaha Xubnaha ka ah oo garoowe ka furmay. Wasiirku waxaa uu sheegay in shirkaani muhiimada sarayo sidii loo dardargelin lahaa […]
Xubin ka Tirsan ururka Daacish oo Lagu Soo Bandhigay Moqdisho
Xubin la sheegay inay kamid tahay Daacish horayna uga mid ahayd ururka Shabaab, ayaa lagu soo bandhigay Muqdisho. Warbixin uu baahiyay telefishinka Universal ayaa eedaysane Jaamac Xuseen Xasan, wuxuu ku faahfaahiyay qabsashadii Daacish ee Qandala iyo dilal ay gausteen mudadii […]
Maxamed Salax ayaa ku guulaystay abaalmarinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan xilli ciyaareedka 2017-18ka
ee uu bixiyo ururka ay ku midaysan yihiin xirfadleyaasha kubbadda cagta Ingiriiska ee magaciisa loo soo gaabiyo PFA. Ciyaaryahankan afka hore uga dheela Liverpool oo 25 jir ah ayaa abaalmarintan ka qaaday Kevin de Bruyne, Harry Kane, Leroy Sane, David […]
Iska hor imaad Ciidanka Dawladda ku dhexmaray Moqdishu
Iska horimaad u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka dhacay Agagaarka Xeradda Generaal Goordan oo dhawaan dowladda ay kala wareegtay Imaaraadka Carabta. Sidda ay xaqiijiyeen dadka degaanka Muddo ku dhow Saacad ayaa waxaa socday dagaal xooggan. Ilaa iyo […]
Jadawalkii Doorashadda Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo la shaaciyey
Gudiga loo xilsaaray doorashadda Gudoomiyaha baalamaanka soomaaliya taasoo la shaaciyey inay dhici doonto 30 april 2018, gudiga loo xilsaaray doorashadda gudoomiyaha baarlamaanka ayaa shaaciyey sidoo kale inta ka sokaysa wakhtigaas la buuxin doono ama la qaban doono, shuuradaha iyo shaqadda […]